सर्जरी गराएर चिन्नै नसकिने भए यी १० हिरोइन, फोटोमा हेर्नुहोस् पहिलेको र अहिलेको रुप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सर्जरी गराएर चिन्नै नसकिने भए यी १० हिरोइन, फोटोमा हेर्नुहोस् पहिलेको र अहिलेको रुप
एजेन्सी। शरीरका विभिन्न अंगहरुको सर्जरी गराउनु फिल्मी र टेलिभिजन क्षेत्रका स्टारहरुको लागि सामान्यजस्तै भइसक्यो । कैयौं यस्ता सेलिब्रेटी छन् जसले शरीरका विभिन्न अंगहरुको सर्जरी गराएका छन् । हलिउड, बलिउड, भारतीय टेलिभिजनदेखि नेपाली सिने क्षेत्रका कैयौं सेलिब्रेटीहरुले शरीरका विभिन्न अंगको सर्जरी गराएका छन् ।
केही सेलिब्रेटी भने यस्ता छन् जसले पूरै अनुहारको सर्जरी गराएर चिन्नै नसकिने भएका छन् । आज कुरा गर्दैछौं यस्ता १० हिरोइनको जसले पूरै अनुहारको सर्जरी गराए र चिन्नै नसकिने भए । आउनुहोस् हेरौं ती सेलिब्रेटीको पहिले र अहिलेको फोटो –